भैलो हो कि कन्सर्ट हो ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / भैलो हो कि कन्सर्ट हो ?
भैलो हो कि कन्सर्ट हो ?
Posted by: युगबोध in विचार October 26, 2017	0 257 Views
तिहार भने पछि चिल्ला रो टी, दे उसी भै लो अनि पटाका † यी तीन कुराले हामीलाई तिहारको महत्व झल्काउ“थ्यो  । हिन्दू संस् कार अनुसार दशै ंलाई सबै भन्दा ठूलो चाड मानिन्छ । तर हाम्रा लागि तिहार ठूलो चाड लाग्थ्यो । किन कि तिहारको महत्व माथिका तीन कुराले प्रष्ट पार्दथ्यो  । हामी तिहारभन्दा ठूलो दशै ं कहिल्यै माने नौ ं ।
समयले हामीलाई फे रिदियो या हाम्रा चाडपर्वलाई फे रिदियो , त्यो ठूला–ठूला समीक्षकहरु बसे र समीक्षा गदैर् हो लान् । यतिबे ला हाम्रा लागि चाडपर्व फे रिए जस् तै समीक्षा मै ले गदैर् छु ।
तिहार भन्ने बित्तिकै तीन महत्वपूर्ण रमाइलो हाम्रा दिमागमा फनफन्ती घुम्थे  । तर आजभो लि ती तीन कुरा लो प हुने अवस् थामै पुगे छन् । हामी त्यो तिहारका तीन रमाइलो लाई अहिले भुल्दै छांै र त्यसको ठाउ“मा पश्चिमा संस् कृति झल्कने संस् कारलाई भिœयाउ“दै रहे छांै  । मानव विकास र सामाजिक रहनसहन बदलिनु नौ लो कुरा हो इन । यसले आमूल
परिवर्तन पनि ल्याउ“छ । हामी शताब्दी पार गदैर् युग परिवर्तन गदैर् एक्काइसांै शताब्दीको एउटा महत्वपूर्ण युगमा आइपुगे का छौ ं । यतिबे ला सानातिना र झिनामसिना कुरामा अडिनु ठीक
पनि हो इन । तर विकासस“गै भित्रिएको विकृतिले हाम्रो संस् कार र परम्परालाई कता डो ¥याउ“दै छ त ? सो च्न आवश्यक छ ।
तिहारमा पाक्ने रो टीको भन्दा महत्व अहिले बजारमा भित्रे का मिठाईले लिन थाले  । दिदी बहिनीले सगुन र प्रसादको नाममा रो टीलाई भन्दा बजारमा पाइने मिठाईलाई महत्व दिन थाले पछि गाउ“घरमा सिन्कामारी, पपरा अनि फिनी रो टी पाक्नै छाडे  । घरको छानामा रातै पहे लै सुक्ने सिन्कामारी र पपरा अब फे सबुकको वालमा दे ख्न पाइन्छ तर घरमा दे खिन छाडे  ।
चिल्ला रो टीले महत्व दर्शाउने तिहारको बे ला गाउ“घरमा रो टी पाक्न छाडे पछि आमाहरु भन्छन्– ‘ ग्याष्ट्रिक र अरु तमाम रो गका डरले चिल्ला रो टी खानै छाडे । घरमा खाने मान्छे नभएपछि कसले दुख गरो स् ।’
सा“च्चै भन्ने हो भने हाम्रा
गाउ“घरमा उहिले का जस् ता रो टी पाक्न छाडिसके  । मान्छे अल्छी भएर हो या रो टीको महत्व अबको पुस् ताले नबुझे र हो , गाउ“–घरमा चिल्ला रो टी धे रै कम पाक्छन् । यस् तै हो भने अबको एउटा पुस् ता पछाडि तिहारमा पाक्ने फिनी, सिन्कामारी अनि पपराजस् ता रो टी पकाउन जान्ने पुस् ता नै रह“दै न ।
तिहारमा सबै भन्दा महत्व थियो दे उसी भै लो  । अहिले जस् तो पै सा र दक्षिणाको लागि ऊ बे ला दे उसी भै लो खे लिदै नथ्यो  । दुई घण्टा मुखै ले भट्याएपछि पाइने एक माना चामलले पनि धे रै खुशी दिन्थ्यो ऊ बे ला । दे उसी भै लो रमाइलो को लागि खे लिन्थ्यो अनि आशीष आदानप्रदान गर्न भट्याइन्थ्यो  । तर आजभो लि कतिसम्म बिकृति भरिएर आयो भन्ने को कुनै ले खाजो खा छै न ।
दे उसी भै लो रमाइलो को लागि हो इन, कमाउनको लागि खे लिदो रहे छ भन्ने आगामी पुस् ताले सजिलै बुझ्ने छन् । हिन्दी अनि रिमिक्स गीत, उत्ताउलो भट्याउने शै ली अनि हे नैर् लाज लाग्ने डान्सले दे उसी भै लो को परम्परागत शै लीलाई कहा“ मिल्काइदियो कहा“ । ऊ बे लाको जस् तो आशीषसहितको भै लो त अब शहर बजारमा दे ख्न पाइने छै न हो ला । बरु कुनै सांगीतिक कन्सर्ट जस् तो दे उसी भै लो चै ं टो ल टो लमा माइक लगाएर नाचे को दे ख्न सकिन्छ ।
अझै पनि गाउ“घरमा भै लो खे ल्न आउ“दा खुशीले आ“गनमा आउने घरबे टी प्रशस् तै छन् । तर शहरमा दे उसी भै लो परै दे ख्दा घरमा ताला ठो के र छतमा लुक्न घरबे टी बाध्य छन् । कारण उत्ताउलो भै लो लाई दिइने दक्षिणा नै हो  । दक्षिणा भने को आफू खुशी भएर दिइने एउटा नगद या जिन्सी वस् तु हो तर यहा“ भै लो खे ल्न आएकाले नै दक्षिणाको रकम तो क्छन् अनि कसरी बसून् घरबे टी आ“गनमा ? गे टमा ताला ठो के र भाग्नुको विकल्प रह“दै न ।
भै लो लाई मनो रञ्जन र परम्परा ठान्ने हरु दक्षिणामा बागेर् निङ गदैर् नन्, उनीहरु नाच्न नचाउन अनि आशीष दिनमै भै लो को महत्व ठान्छन् । तर विकृतिले गलाउ“दै लगे को भै लो लाई सानो कन्सर्टको रुप दिएर कमाउने बाटो को रुपमा लिन्छन् । अनि टो ल छिमे कलाई आजित पानेर् गरी रकम असुल्छन् । यस् तै भै लो ले गर्दा अब सुस् तसुस् त दे उसी भै लो पनि कन्सर्ट हो जस् तै लाग्न थाल्यो  ।
दे उसी भै लो स“गै रमाउने अकोर् पाटो थियो पटाका । तिहारमा के टाके टी रमाउने भने कै पटाका पटकाएर हुन्थ्यो  । तर पटाका पनि विकृतिको मारमा परे र हो ला, ने पालमा पटकाउनै बन्दे ज भयो  । मानव जीवनलाई असर नगनेर् खालका पटाका बिक्री गर्न दिनुपनेर् तर अनुगमनको कमीले गर्दा हरे क प्रकारका पटाका बिक्रीमा रो क लाग्यो अनि पाइन छाडे पटाका  ।
है सियत र सो र्सवालाहरु बम जस् ता पटाका घर आ“गनमै पट्काउ“छन् तर रमाइलो गर्न के टाके टीले
झिर्झिरे पटाकासम्म पाउ“दै नन् । ठूला र खतरा हुने पटाकालाई बन्दे ज गरे र सामान्य खालका पटाका बिक्री वितरणमा अनुमति दिए खासै फरक पर्छ जस् तो मलाई लाग्दै न । बरु प्रशासनले कडाइ चंै गर्नुपर्छ ।
यस् तै धे रै कुराहरुलाई सो च्न थाल्ने हो भने अब आउने पुस् ता दशै ं तिहार भन्दा भ्याले न्टाइन र क्रिसमसमा बढी रमाउने छन् । किनभने हाम्रा चाडपर्वहरुले पश्चिमा संस् कृति र परम्परालाई मिसाउन खो ज्दै छन् । तर पश्चिमाहरुका चाडपर्व नितान्त शुद्ध छन् । हामी हाम्रा पर्वलाई भन्दा उनीहरुका पर्वलाई महत्व दिन थालिसके का छौ ं ।
भै लो कन्सर्टको रुपमा विकसित हु“दै छ, चिल्ला रो टीहरुको ठाउ“ मिठाईले लिदै छ अनि पटाका पट्काउ“दै रमाउने अधिकार प्रशासनले खो स् दै छ । यस् तो खालको सांस् कृतिक रुपान्तरणलाई अब के भन्ने ? आमूल परिवर्तन कि अग्रगामी छलाङ ?
Previous: खुला दिसामुक्तपश्चातको अवस् था अनुगमन
Next: मेरो सपना साकार भयो